Peeji nke Linkedin dị elu nke 10 iji nweta ọrụ na Dubai | Ọrụ - Ọrụ - Ntuziaka Njem maka Ọrụ
Peeji nke Linkedin dị elu nke 10 iji nweta ọrụ na Dubai, N'isiokwu a, ụlọ ọrụ anyị debe peeji kacha mma ị ga-eso na Linkedin iji nweta ọrụ na Dubai, United Arab Emirates.
Usoro mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-aghọ ụzọ ewu ewu nke na-acho oru na Dubai. Dịkwa ka anyị niile mara na ọtụtụ ndị nọ na United Arab Emirates na-eji LinkedIn saịtị ọrụ iji nweta ọrụ.
na nso nso ikpo okwu a jisiri ike imelite Ọ bụrụ na anyị na-eme ụlọ ọrụ a afọ ole na ole gara aga, ọ ga-adị mfe ma anyị chọọ ọrụ. Ya mere n'ozuzu na-ekwu okwu ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ zuru oke na United Arab Emirate should ga-ebu ụzọ soro peeji ụlọ ọrụ ole na ole na LinkedIn.
Ọ ga-enyere gị aka imeta ọ dịkarịa ala ezi uche nke onye na-akwụ ụgwọ n'oge ahụ, N'ezie, ị ga-enweta nzacha ọrụ gị dị na ụlọ ọrụ ndị anyị na-enye n'okpuru.
The CareerDubai.net Linkedin Page bụ otu n'ime ndị isi obodo ebe ọrụ na Dubai. Thelọ ọrụ ahụ nwere profaịlụ na-atọ ụtọ maka ndị ọbịa si mba ọzọ na-ele anya maka ọrụ na Dubai.
Career Dubai.net jikwaa ịnye ọrụ nke ha ruo ụfọdụ ụdị dị elu na mpaghara Gulf. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na ngalaba ọrụ ndị ọrụ Dubai ebe 2004 na-ekwu n'ozuzu ha maara etu esi agbapụta ndị na - ewe ndị ọrụ ọhụụ n'ọrụ.
Ọrụ nke ụlọ ọrụ a bụ iji nyere aka expats na ndị ahịa obodo site na isi wee gota ndị ọkachamara kachasị ruru eru na UAE.
The Boyen Haddin na-bụ Ndị ọrụ na ndị na-ewe ndị ọrụ n'ọrụ si na Mumbai, Maharastra na inwe ndị na-eso ụzọ 250,039 na Linkedin. Yabụ, ụlọ ọrụ a na-adọrọ mmasị. Companylọ ọrụ a na-arụ ọrụ ịbanye n'ọrụ iji nye usoro kachasị mma maka ndị ọkachamara si gburugburu ụwa.
Boyen Haddin na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ kacha mma na India na Dubai. Yabụ, ohere ọrụ nke ụlọ ọrụ a nyere nọ na ngalaba dị iche iche. Firmlọ ọrụ ahụ akọwapụtara ya na nchọta ndị isi nọ na Dubai. Ọzọkwa, gị na ụlọ ọrụ a, ị nwere ike ịnweta ndụmọdụ ahụ ohere oru na uzo onye isi, yana onye isi mmepe ọkwa ọkwa nchịkwa.
The ụlọ ọrụ pụrụ iche na-elekwasị anya na ka ịbanye na Middle East ahịa dị oke arụmọrụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị bụ ezigbo onye njikwa ọkachamara na ụlọ ọrụ Boyen Haddin, ịnwere ike inyere ndị ọrụ n'ọrụ aka ịkpọtụrụ gị n'adaghị.
Emirates Ụgbọ elu / ụgbọelu
Companylọ ọrụ Emirates dị na Dubai. Agbanyeghị, aha ụlọ ọrụ ahụ zuru ezu bụ Emirates Group. Thelọ ọrụ ahụ na-arụkwa ọrụ karịa ndị ọrụ 103,363 sitere na mba karịrị 160. Nke ahụ karịrị ọmarịcha ihe. Companylọ ọrụ na-ezipu ọrụ emelitere na-enye ugboro ugboro na ibe Linkedin. Yabụ, n'eziokwu, ọ bara uru ịgbaso na Linkedin.
Ndị otu Emirates inwe otutu ndi otu HR. Ha na-esi n'ozu ụwa niile enweta ọrụ. N'otu ụzọ ahụ, ụlọ ọrụ ahụ dịgasị iche ndị si mba India, South Africa na ọbụna site na US
Emirates dum otu Pọtụfoliyo gụnyere ụwa kasị ukwuu ụgbọelu na Emirates. Ma n'ezie, ọrụ nile ha na-enye nwere ike nyochaa site na ebe nrụọrụ weebụ raara onwe ha nye nke ụlọ ọrụ na LinkedIn ma ọ bụ na ebe nrụọrụ weebụ ha profaịlụ emirates.com/careers
Dubai ọdụ ụgbọ elu Linkedin peeji bụ echiche amamịghe ọzọ ị ga - eso iji nweta ọrụ na Dubai. Companylọ ọrụ ahụ nwere ma na-elekọta ọtụtụ ngalaba azụmahịa. Dịka ọmụmaatụ ọrụ na mmepe nke Dubai International (DXB).
N’ezie Dubai International (DXB) bụ ọdụ ụgbọ elu mba ụwa kachasị elu. Ha bụ n'ezie egoro puku ndi oru. Agbanyeghị, na-eso na profaịlụ profaịlụ LinkedIn ha, a ga-agwa gị gbasara ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ yana Dubai World Central (DWC) dịka ọmụmaatụ - ogige ụwa n'ọdịnihu.
Ọfọn, ọdụ ụgbọ elu Dubai ndị ọrụ kwesịrị ịrụ ọrụ ike iji nyefee ndị ahịa ahịa ihe nzizi ụwa. Yabụ, ọrụ ndị ụlọ ọrụ a na-enye nwere ike ịbụ a nche nche, ma ọ bụ onye na - ahụ maka ọrụ ndị ahịa. Ọrụ gị ga-abụkwa nchekwa na ijide n'aka na akụkụ ikuku nke ọdụ ụgbọ elu na-arụ ọrụ nke ọma.
Companylọ ọrụ a bụ azụmaahịa ochieagbanyeghị, na-etolite ibu ngwa ngwa. E hiwere ụlọ ọrụ ahụ na 1992 n'okpuru aha Majid Al Futtaim. Kemgbe ahụ bụrụ a Nzukọ a maara nke ọma bụ Middle East.
Inwere ike inweta ọrụ dị ka nnukwu ụlọ ahịa, na-arụ ọrụ n'okpuru obodo na usoro iwu na HR. Ọzọkwa, na-arụ ọrụ na ngalaba na-ere ahịa ma na-ejikwa oge ezumike n'ofe Middle East, Afrịka na Eshia. Enwere ọgbakọ juru na Dubai.
Emaar Ahịa ịre ụlọ
Ọrụ na Emaar bụ Lifestyledị mmepe ndụ Dubai. E hiwere ụlọ ọrụ ahụ na 1997. Na A na-emeghe ohere ọrụ dị iche iche na Dubai na Abu Dhabi. Iji maa atụ, itylọ nnabata ndị ọbịa na Dubai na Abu Dhabi. Ọzọkwa, ịnwere ike ịnwe nhọrọ na azụmaahịa azụmaahịa, yana ntụrụndụ, na Ngwongwo mmepe na Dubai.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ndị na-eso ụzọ 563,914 na Linkedin na karịa 20 ọrụ dịịrị ndị ọbịa mba ofesi. Nwere ike iji Passion rụọ ọrụ gị, yabụ jiri Emaar Real Estate rụọ ọdịnihu gị ọhụrụ.
Expo 2020 na Dubai
Ikwesiri iso uzo ukara LinkedIn maka Expo 2020 na Dubai. Gọọmentị dị na United Arab Emirates na-agbakwunye ọrụ ọhụụ na-enye ọwa a mgbe niile. Yabụ, soro Expo ka ị nwee ike iweta World Expo na mpaghara dịka onye njikwa etiti ma ọ bụ onye njikwa ọkwa.
Expo bụ ibe ibe Linkedin ọzọ n'etiti ndị kachasị elu 10 Linkedin peeji iji nweta ọrụ na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. Yabụ, n'ozuzu ikwu okwu, ịkwesịrị ịtụle akwụkwọ maka ọrụ a tupu agwụcha.
Ndi Emaar Hospitality Group bu otu n’ime ndị na-eduga ndị ọrụ maka ndị expats na UAE. Azụmaahịa a bụ nwekwaara ikike nke Emaar Njirimara PJSC. Ọnụnọ ha nọ na Linkedin dị nnọọ ka ụzọ ọkọlọtọ. Agbanyeghị, nzukọ a dị n'ime otu ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ mmepe kacha baa uru na Dubai.
Inweta ọrụ na Emaar, ọ dị nwute, mkpa ka itule site na iru eru tozuru oke site n ’akụkụ gị n'ahịa azụmaahịa. Ma n’otu oge ahụ, i kwesiri inwe ahụmịhe njikwa n’ahịa azụmaahịa ma ọ bụ na-ere ahịa ma ọ bụ ile ọbịa na ntụrụndụ. Nke ahụ ga - enyere gị aka ị nweta ajụjụ ọnụ na United Arab Emirates wit Emaar HR njikwa.
Ndị otu ile ọbịa nke Emaar na-agbasa ma na-akpọkwa ndị puku ndị mba ọzọ si n'akụkụ ụwa niile. Na ya Mkpa ego ka na-eto maka ndị na-aga mba ụwa. Yabụ, ọ bụrụ n’ị na-achọ inweta ọrụ dịka onye ọrụ aka ọrụ ịkwesịrị ịhọrọ njem na Europe dịka nhọrọ nke mbụ. N'aka nke ọzọ, Middle East bụ maka ndị njikwa na India ọtụtụ ihe maka ndị isi njikwa ọrụ dịka ndị isi na CFO. Agbanyeghị, Emaar Hospitality Group bụ ugbu a Official Hotel na Hospitality Onye Mmekọ nke Expo 2020 Dubai.
E guzobere ụlọ ọrụ ADNOC Group na 1971 na Abu Dhabi. Ha na - abụkwa otu n'ime ụlọ ọrụ mbụ na Linkedin. Nzukọ a na-arụ ọrụ dị ka Oillọ ọrụ Mmanụ ala nke mba. Ezigbo LinkedIn peeji ị ga - eso dị ka Injinia ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na - enwe amamihe dịka ngalaba ọrụ aka.
ADNOC bu otu n’ime Ndị na - emepụta ike ụwa na Middle East. Ndị njikwa na-arụ ọrụ Kuwait na Saudi Arabia na ọbụna site na Canada na United States. Companylọ ọrụ ahụ agafeela afọ 45. Na akụkọ ihe mere eme, ADNOC ejiriwo nwayọọ nwayọọ na-eto n’afọ ndị a. Na aha ụlọ ọrụ ahụ na-agbasawanye karịa arụmọrụ ya.
Organizationlọ ọrụ a nwere ihe karịrị ụlọ ọrụ 18 na ndị enyemaka na mpaghara Mmanụ na Gas. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na Middle East ị kwesịrị iso ADNOC n'ezie. Thezọ kachasị mma bụ ịmepụta akaụntụ na Linkedin ma soro mmelite ha maka ọrụ mmanụ na gas na-agbakọ. Ọzọkwa tinye hashtags maka ịgagharị na mmepụta, nhichacha, mmanụ na nkesa.
Companylọ ọrụ ụgbọelu kacha mma / ụgbọ elu si Abu Dhabi. Companylọ ọrụ a bụ n'ezie A maara nke ọma n'ụwa niile. Etihad Airways bụ gọọmentị rụrụ ọrụ azụmaahịa n'okpuru Iwu United Arab Emirates iwu na usoro.
A na-anabata ndị na-ahụ maka ego na ndị ọrụ obodo na-achọ ọrụ itinye maka ụgbọ elu mba nke United Arab Emirates. Etihad na-ahụ maka ọrụ apụ ụbọchị niile. Inwere ike inweta ọrụ n’ọrụ ndị ahịa gị na ngalaba a na-efe efe. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ a nwekwara ọtụtụ ọnọdụ ọrụ na ngalaba ọrụ na ngalaba ọrụ.
Companylọ ọrụ abịa ụzọ dị anya tupu ebili dịka otu n'ime ụdị mba kacha mma. Ha na-alụ ọgụ nke ọma kemgbe mbido njem ahụ. Na ikwu okwu n'ozuzu, ụlọ ọrụ ahụ malitere na 2003. Kemgbe ahụ ejirila nnukwu ọ rụzuru. Isi ihe ọzọ dị mma bụ na ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-enwe obi ụtọ na ha nwere ike ịkekọrịta ọtụtụ nde ndị njem njem ụbọchị niile. Ma n'ezie nweta afọ ojuju n’ọrụ n’ime ngalaba asọmpi ndị a.
mmechi - Top 10 Linkedin Pages Iji nweta ọrụ na Dubai
Yabụ, site na isoro ibe 10 Linkedin anyị dị elu iji nweta ọrụ na Dubai. Azịza ya bụ ee, naanị ihe ị ga - eme bụ pịa ma soro peeji ụlọ ọrụ ha. Mgbe ndị a otu na-eziga ọrụ enye ga-agwa gị na profaịlụ Linkedin gị. Ọzọkwa, smart ụzọ bụ naanị ịgbaso a hashtag ma tinye ha mbanye na inweta akwụkwọ na Dubai.
Linkedin bụ otu n’ime usoro kachasị mma maka ndị na-achọ ọrụ. Nke ahụ bụ eziokwu, yabụ ị ga-atụle iji profaịlụ mgbasa ozi mmekọrịta gị maka ebumnuche nyocha ọrụ. Ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka United Arab Emirates. Linkedin bụ nnukwu ewu ewu na mba anyị. Yabụ, buru nke a n'uche, Anyị na-achọ gị ka ịchọta ọrụ na-achọ ọrụ na Dubai na Abu Dhabi.
Citylọ ọrụ Dubai City na-enye ezi nduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ọrụ na Dubai eduzi. Yabụ, site na nke a n'uche, ị nwere ike ịnweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ n'ime United Arab Emirates ya na asusu gi.